Jaamacadda muqdisho iyo ururka maandeeq ee gothenburg sweden oo deeq raashin ah gaarsiiyay jubbada hoose – kismaayo |
Jaamacadda muqdisho iyo ururka maandeeq ee gothenburg sweden oo deeq raashin ah gaarsiiyay jubbada hoose – kismaayo
Jaamacadda Muqdisho iyo ururka maandeeq ee gothenburg sweden oo deeq raashin ah gaarsiiyay boqol iyo kunton qoys oo ka soo barakacay gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ka mid ah gobolada ay abaaraha ka jiraan , Deeqda la gaarsiiyay ayaa isugu jirtay Sonkor, Bur, Caana booro, Saliidda raashinka, iyo timir.
Qoysaska deeqda ka faa’iidaystay ayaa waxay isugu jireen qaybaha bulshada sida haween, caruur, iyo odayaal oo kasoo barakacay gobolka Jubbadda Hoose iyadoo ay saamayn ku yeelatay abaarta sii daba dheeraatay .
Dadkii ka faa’idaystay ayaa u mahad celiyay deeqda qiimaha badan ee ay soo gaarsiiyeen Jaamacadda Muqdisho iyo ururka maandeeq ee gothenburg sweden oo deeq raashin waxayna Illaahey ugu baryeen in miisaankooda ugu kabo.
Ustaad Aadam Axmed Xuseeen (Xerow) oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga gurmadka degdega ee Jaamacadda Muqdisho oo u hadlayey Jaamacadda Muqdisho iyo ururka maandeeq ee gotenber sweden oo deeq raashinayaa sheegay in ay mar kasta diyaar u yihiin in walaalahooda dhibaataysan ay wixii karaankooda ah ay gaarsiiyaan.
Waxaa uu ugu baaqay inay isu naxariistaan, iskaalmaystaan Illaaheyna baryaan inuu raxmadiisa siiyo , wuxuuna u mahad celiyay ardayda Jaamacadda Muqdisho iyo maamulkeedaba iyo ururka maandeeq ee gothenburg sweden oo deeq raashinkaalinta mar kasta ay bulshadooda ay ugu jiraan sidii shacbiga Soomaaliyeed wixii karaankooda ah ay ugu hiilin doonaan.